Sidee ayuu u shaqeeyaa howlgalka mashiinka goynta laser-ka?
waxaa maamula 20-08-25
Inta lagu jiro howlaha wax soo saarka iyo wax soo saarka, si loo buuxiyo shuruudaha wax soo saarka wax soo saarka, qalabka kala duwan ayaa loo baahan yahay in lagu jaro qeexitaanno gaar ah si loogu adeegsado geedi socodka wax soo saarka xiga. Sidaa darteed, warshadahaan wax soo saar iyo warshadeyn, waa lagama maarmaan ...
Hordhac Shirkadeena Hordhac
waxaa maamula 20-08-19
Shandong Buluoer Intelligent Technology Co., Ltd. Wuxuu ku takhasusay mashiinka jarista CNC Plasma, Mashiinka jarista ololka CNC, Qalabka goynta Laser, Qalabka alxanka, Nidaamka CNC iyo qaybaha shaqada ee cilmi baarista iyo horumarinta, wax soo saarka, iibka iyo adeegga. Shirkaddu waxay xiriir la leedahay Shandon ...
Qalab noocee ah ayaa ku habboon goynta goynta mashiinnada goynta laser-ka?
waxaa maamula 20-08-18
Mashiinka goynta loo yaqaan 'laser goynta laser' waa mashiinka goynta ugu caansan ee qarniga 21aad. Maaddaama ay ka kooban tahay qalab ballaaran oo wax soo saar ah iyo shaqooyin awood leh, mishiinka goynta leyska fiber-ka ayaa si tartiib tartiib ah loogu soo bandhigay warshadaha waaweyn, barnaamijyadiisana aan ...
Immisa waa mashiinka goynta laser? Tifatiraha Buluoer wuxuu leeyahay wax uu dhaho
Marka la eego qiimaha mashiinka goynta laser, imisa weeye mashiinka goynta laser? Iyada oo la horumarinaayo sayniska iyo tikniyoolajiyada iyo baahida sii kordheysa ee qalabka mashiinka goynta laser ee warshadaha kala duwan, qof walba dabiici ahaan aad ayuu uga walaacsan yahay qiimaha mashiinka goynta laser; ka ...
Maxaa sababa xawaaraha goynta injirta laser ee mashiinka goynta laser-ka?
waxaa maamula 20-08-14
Xulashada xawaaraha mashiinka goynta laser biraha waa mid aad muhiim u ah marka la gooyo qalabka. Haddii xawaaruhu aad u gaabinayo, si kasta oo ay saameyntu u fiican tahay, waxay saameyn ku yeelan doontaa soo-saarka. Haddii xawaaruhu dhakhso yahay laakiin tayada la hubaa, way ka yaraataa khasaaraha. Xaqiiqdii, biraha la ...
Dhawr mashiin oo goynta leysarka ah ayaa midba midka kale loo raray
Bixin joogto ah oo amarro ah ayaa ka dhigaysa warshadda mid aad u deggan. Shaqaaluhu waxay ku mashquulsan yihiin soo saarista, xirxirida, iyo rarka, tirada mashquulsan ayaa naga dhigeysa inaan helno guulo badan sanadka cusub. Iyada oo horumar joogto ah iyo ayna of technology wax soo saarka, waxaan isku dayi doonaa sida ugu fiican si ay ula kulmaan macaamiisheena '...
Sababaha burrsarka marka mashiinka goynta leysku gooyo birta kaarboonka
Marka mashiinka goynta laser-ka uu gooyo bir-bir, waxaa ku yaal meelaha ugu hooseysa dusha sare ee goynta. Sababaha ugu waaweyn waa: 1. Arimaha diirada la saaray. Mawqifka diirada ee leysarka ayaa qaldan. Waxaad ku xallin kartaa dhibaatadan adigoo hagaajinaya diiradda. 2. Dhibaatada soosaarka laser-ka. Marka hore hubi in leysarka…
Birta noocee ah ayay goyn karaan mashiinka goynta laser bir
Horumarinta sayniska iyo tikniyoolajiyadda waxay keeneysaa qalab badan oo cusub, iyo dhinacyo kala duwan, waxaa jiri doona taageero badan oo la bixin karo, gaar ahaan hadda qalab fara badan oo farsamo, sidoo kale maxaa yeelay horumarka sayniska iyo teknolojiyadda ayaa wanaag keenay horumarka, tani waa v ...
Maxay soo saareyaal badani soo saarayaan mashiinnada goynta laser-ka
waxaa maamula 20-08-06
Horumarka iyo horumarka sayniska iyo teknolojiyadda, xawliga nolosha dadka ayaa si dhakhso leh u sii kordheysa. Xilligan lacagta, nolosha dadka iyo shaqadoodu waxay bilaabeen inay ku daba-galaan wax-ku-oolnimada iyo saxsanaanta, iyo mashiinnada goynta leysarka fiber-ka ah ayaa la kulmi kara wax-ku-oolnimada iyo saxsanaanta sare ...
Miyaad dooratay nooca saxda ah ee mashiinka goynta CNC?
Iyadoo la adeegsanayo hormarinta tikniyoolajiyadda casriga ah ee teknoolojiyadda, qalabka mashiinka goynta CNC ayaa si isdaba joog ah loo soo saaray. Laga bilaabo gooynta gacanta ilaa mashiinka goynta CNC, mashiinka goynta plasma CNC ilaa mashiinka goynta goynta laser, booska xulashada ee qalabka goynta sidoo kale waa koraan ...
Si diirran ugu dabaaldega guusha shirkad gaar ah oo ku taal Shandong!
waxaa maamula 20-07-15
Si diirran ugu dabaaldega guusha shirkad gaar ah oo ku taal Shandong! Nidaamka qalabka wuxuu leeyahay adkeyn wanaagsan, saxsanaanta gudbinta sare, wadashaqeynta laba geesoodka ah, howlgalka xasilloon, software-ka barnaamijka FASTCAM ee sawirada sawir-gacmeedka oo dhameystiran, iyo nestin fudud ...
Waa maxay mabda'a shaqo ee mashiinka goynta plasma ee CNC
Mashiinnada jarjarka plasma ee CNC ayaa hadda si ballaaran loogu isticmaalaa warshadaha kala duwan waxayna noqonayaan kuwo si ballaaran loo adeegsado. Soo-saareyaal badan ayaa sidoo kale doonaya inay ka beddelaan hab-dhaqameedka caadiga ah ee xakameynta tirooyinka, kor u qaadaan hufnaanta habsami u socodka iyo yareynta kharashaadka shaqaalaha, laakiin ma fahmin qalabka, wha ...